အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: အနုအနယ် အချစ်ရှာရာဝယ်
ချစ်တာမှာ ဒါတွေ မပါရာတယ်
ဒီ အချစ် အကြောင်းတွေရယ်
ပြောသမျှ ပါးစပ် ပုံပြင်တွေလဲ
(နာမည် ၅ လုံးနဲ့ ခြင်္သေ့ကလေးသို့)
ဒီနေ့ ညစာပါ မောင် ဟင်းချက်ပါတယ် သီးစုံ ကုလားဟင်းနဲ့ ပုစွန် အစပ်အိုးကပ်ပါ တီစားချင်တယ်ဆိုလို့ မောင်က ပုစွန်ကို ချက်ကျွေးတာပါ ချက်နည်းတွေကတော့ တင်ထားပြီးသားဆိုတော့ ထပ်မတင်ပေးတော့ဘူးနော် ဒေတာ ရီဒန်တန်စီ ဖြစ်မစိုးလို့ အဟေးဟေး စကားကြီး စကားကျယ်တွေ ပြောချပလိုက်ပြီ စကားလုံးတွေ ကတော့ အတော်ကြီးတယ် ပါးစပ်နဲ့ ဘယ်လို ဆန့်လဲမသိ လင့်ခ်တွေပဲ ပြန်ထည့်ပေးလိုက်တယ် ချက်စားချင်ရင် ကြည့်လို့ရအောင်.....
ပုစွန် အိုးကပ် အစပ်က ဒီမှာပါ
အပေါ်ဘေး ပုံက မှိုဟင်းရည်ကတော့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ သွားဝယ်ရင် မောင်စားချင်လို့ ဝယ်လာတဲ့ ယိုးဒယား ငပိ မှိုဟင်းရည်ပါ မှို ၅ မျိုးလောက် ကို ငါးပိရည်ထဲမှာ ထည့်ပြီး ဟင်းရည်ချက်တာပါ ကျက်ခါနီးတော့ ဆူးပုပ်လေးခပ်လိုက်တာပါ မွှေးပါတယ် မကြိုက်ရင်တော့လဲ နံတာပေါ့လေ နော့ တီကတော့ မှိုဆိုရင် ဘယ်လိုချက်ချက်ကြိုက်ပြီးသားဆိုတော့ စားကောင်းပါတယ် ဆူးပုပ်လဲအရမ်းကြိုက်တယ်လေ ထမင်းစားကောင်းသောညပါပဲ ဒီနေရာကနေ မောင့်ကို ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်
ထမင်းလေးတောင် မောင်ချက်ရင်ပိုကောင်းတယ် တကယ်ပြောတာပါ ယိုးဒယားဆန်က ရေထည့်တာ ချင်ရတာခက်တယ် အရင်တပတ် အိမ်မှာလာနေတဲ့ သူငယ်ချင်းဆို မချက်တတ်ဘူး သူက ဟင်းချက်တာတော့ အသေကောင်းပဲ သူချက်ကျွေးသမျှတွေ ပုံသေချာရိုက်ထားသေးတယ် တင်ပေးအုံးမှာ ထမင်းတော့ သူက ချက်ရတာ အဆင်မပြေဘူးတဲ့ ရေထည့်ရတာ ချိန်ရလို့ မောင်ကတော့ ကျွမ်းပါတယ် မောင်ချက်ထားတဲ့ ထမင်းလေးက ဖြူအုပြီး မွှေးနေတာပဲ အချစ်တွေပါလို့ဖြစ်ရမယ် ခိခိခိ (အားကျကြစေသတည်း)
Posted by တီချမ်း at 9:38 PM
Crystal July 11, 2010 at 9:47 PM
တီတီချမ်းက အစားအစာ ချက်ကျွေးတာ ဝါသနာပါပုံရတယ်၊ တီချမ်း ဘယ်နားနေပါလိမ့်နော်။
အန်တီချမ်း July 11, 2010 at 9:49 PM
ဘီတီအက်စ် ကနေ ၃ မိနစ် လျောက်ရင် တီ့အိမ်ရောက်ပါတယ်
မနက်ဖြန်တောင် အာလူးထမင်းချဉ်လုပ်စားမလို့ မောင်နဲ့ တိုင်ပင်နေသေးတယ် အာလူးရော ခရမ်းချဉ်သီးရော ဝယ်ထားပြီ
စားချင်ရင် ကါန်တက် လုပ်လိုက်တော့ ဟေ့ဟေ့
Mon Petit Avatar July 11, 2010 at 10:07 PM
အာလူးထမင်းချဉ်? Great! Looking forward to readapost under the label "တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း ". I think I bug you too much by requesting posts,lol.
အန်တီချမ်း July 11, 2010 at 10:15 PM
hi mon petit
it is already posted once
u can check at the link below,
ဖိုးစိန် July 12, 2010 at 6:16 AM
မောင်ချက်ထားတဲ့ ထမင်းလေးက ဖြူအုပြီး မွှေးနေတာပဲ အချစ်တွေပါလို့ဖြစ်ရမယ်
ဒီနေရာကနေ မောင့်ကို ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်
မောင်က နက်စ် ပလိမ်းသောက်တယ် ရေနည်းနည်းနဲ့
ကုတင်ပေါ်ကို ဝုန်းကနဲ ထိုးချလိုက်ပြီး….“မောင်” လို့အော်လိုက်ရင် လာနှိပ်ပေးပါတယ်
collection of MG (from chen) ;P
Mon Petit Avatar July 12, 2010 at 9:56 AM
Thank you for the link. Just read it and seems delicious. It occurred to me that I have read it before. OMG, how can I cure my absent-mindedness.
Leo July 12, 2010 at 10:07 AM
တီရေ တီချက်ကျွေးတာတွေ စားချင်ပါတယ် ဘန်ကောက်ကိုပြန်လာရင်။
အန်တီချမ်း July 12, 2010 at 10:25 AM
မျောက်စုတ် မျောက်နာ မျောက်ကလချာ
ဒိုင်းညှောင့် ဒိုင်းညှောင့် ဘူးညွှန့် အရီးညွှန့်
မွန်ပတိရေ အသက်က အတော်ကြီးပြီထင်ပါ့
အော် လူတွေ လူတွေ ကျုပ်က ဖုန်းလိုက် သူတို့တွေက ဖော်လိုက်
ပေါ်ကုန်ပြီ အေ့ လုပ်ကြ လုပ်ကြ ကြည့်လုပ်ကြ
ချစ်ကြည်အေး July 12, 2010 at 10:47 AM
တီချမ်းတို့များ ကံကောင်းပါ့...တီချမ်းရဲ့မောင်က ဟင်းချက်ကောင်းမဲ့ပုံပဲ.. တို့ အိမ်ကလူကြီး တီချမ်းဆီ မီးဖိုချောင်ထရိန်နင် လွှတ်လိုက်အုံးမှပါ... ခွိခွိစ်....:P
အန်တီချမ်း July 12, 2010 at 12:20 PM
မီးဖိုချောင်တင်မက အကုန်သင်ပေးလိုက်မယ် မမချစ်
ဘာတွေ သင်ပေးမလဲ သိချင်ရင် ဒီမှာ တီတော်တာလေးတွေ
ပီတိ(စိတ်ပညာ) July 13, 2010 at 9:15 PM
တီတို့ကတော့ ပိုင်တယ်ကွာ ချက်ကျွေးမယ့်သူတွေဘာတွေနဲ့
sweetpeony July 14, 2010 at 4:43 PM
တခါမှ မစားဖူးဘူး ငပိရည်ကို မှိုနဲ့ ချက်တာကို..
အန်တီချမ်း July 14, 2010 at 7:39 PM
သူတို့ ငပိရည်က တမျိုးလေး
ဒီမှာတော့ နေရာတော်တော်များများမှာ အဲ့မှို ဟင်းရောင်းတယ်
အကုန်ပစ်ထည့်ရုံပဲ မှို ၅ မျိုးရယ် ရွှေဖရုံသီးလဲပါသေးတယ် ဆူးပုပ်ရယ်
ခဝဲသီး ရယ် အဲ့လို ဘာဘာညာညာတွေပါတယ် ထိုင်းမြောက်ပိုင်းက အစာလေ